Amarku wuu isbeddelayaa: kor ku xusan Nuur, hoos ku yaallaa waa Life kaas oo isku dhisa qaabab kala duwan oo ku saabsan xarun.
Xaruntu waa nolol, xaruntana waa iftiin, iyo, oo ku saabsan, iyo dhammaan foomka oo dhan waxay socotaa nolosha.
Vol. 1 AUGUST, 1905. No. 11
Mabaadii'da weyn ee dunidu waa: miyir, dhaqdhaqaaq, walax, iyo neef. Waxyaabaha weyn ama hababka weyn ee mabaadiida dunidan lagu muujiyey dunidan la arko, waa: nolosha, qaabka, jinsiga, iyo rabitaanka. Waxyaabaha ka soo baxa qodobadan ama geeddi-socodka iyada oo loo marayo muuqaal caalami ah, waa: fikir, shakhsiyad, nafta, iyo doonista. Mabaadi'da, qodobbada, iyo helitaanka, ayaa ugu dambeyntii loo xalliyaa oo noqdaa miyir-beel. Mowduucyada dunidu waxay si kooban u eegeen. Qodobka koowaad ee dunidan cajiibka ah ayaa ina hortaagan: mawduuca nolosha. haddii ay tahay arrin caadi ah oo ah miyir-qabnimadu waxay u tahay adduunka noumenal. Maqnaanshaha waa fikrad ah dhammaan dareenka suurtogalka ah; iyada oo joogitaankeeda oo dhan wax walba lagu hagaa iyada oo loo marayo gobollada iyo shuruudaha ujeedka ugu dambeeya.
Noloshu waa bilowgii hawshan; dareenka bilowga iyo dadaalka; Horumarka laga gaaray jaangooyooyinka caalamiga ah. Noloshu waa hab lagu noqdo; waxa kaliya ee macnaheedu yahay, ma aha dhammaadka. Nolosha dunidan cajiib ah ma aha dhammaantood; waxa kaliya ee ka mid ah dhaqdhaqaaqa-qoondaynta-kaas oo caalamku caadi u yahay in loo beddelo qaabab maaddaama uu ka soo baxo walxaha ku jira qoyaanka.
Noloshu waa baddo aad u xoog badan oo ay Neef Nacasku guurto, taas oo keenta in ay ka soo baxdo nidaamyo aan muuqan oo aan muuqan ee caalamka iyo dunidaba. Kuwani waxay ku dhalatay dareenka nolol aan la arki karin qaab muuqaal ah. Laakiin waxoogaa yar, soo-boodhka ayaa soo noqda, oo dhammaantood dib-u-soo-celi-noqo aan la arki karin. Sidaa darted, dareenka nolosha ee aan la arki karin dunidu waa la duuduubay mar kale. Waxaa jira qulqulo badan oo ah baddaha nolosha; adduunkeenna oo dhan wuxuu ku nool yahay mid ka mid ah aaladahaas. Waxa aan ognahay nafta noloshu waa dhexdhigeeda kaliya iyada oo loo marayo muuqaal muuqda, isbedelka xajmiga, laga bilaabo muuqaalka aan la arki karin.
Noloshu waa arrin dhib badan, laakiin aad uga sarreeya waxa ka mid ah waxyaabaha la yaqaan ee aan la sheegi karin arrinka ficilistaha. Saynisku waa mujtamaca caqliga ah ee ilbaxnimada casriga ah; laakiin sayniska maaddada ayaa u dhimanaysa dhalinteeda, haddii aysan ka kor marin heerarka hoose ee dunidan cajiibka ah. Riyadii Physicist waa in la caddeeyo in noloshu ay tahay natiijo halkii sabab. Wuxuu soo saari lahaa nolol aan nolosha ku jirin; Hagaajinta hawlgalkeeda sharciyo gaar ah; ku adkee sirdoonka; ka dibna u kala diri, adigoo aan tegin wax raadad ah oo aan waligiis ku jirin qaabka, ama ay ka muuqatay sirdoon. Waxaa jira kuwa aaminsan in noloshu soo saari karto meeshii aaney jirin; in ay muujin karto sirdoon; in sir-doonka la sii deyn karo weligiis. Laakiin looma maleynayo in sidaasi ay u fahmi karto hababka noloshooda inta ay diidaan inay aaminaan ama ay ku fekeraan ku saabsan jiritaankooda marka laga reebo foomka. Qaar ka mid ah muujinta nolosha ayaa la mahadcelinayaa, laakiin kuwa sheeganaya inay awood u leeyihiin inay soo saaraan nolol "asal" waxay weli yihiin kuwo laga fogeynayo xalka dhibaatada iyagoo markii hore ahaa. Si loo soo saaro nolol aan ka dhalan karno, waxay dhalinaysaa helitaanka in aysan jirin wax "dhac", sababtoo ah nolol lama soo saari karo halka uu nool yahay. Noocyada muujinta nolosha waxay noqon kartaa mid aan caadi ahayn, laakiin noloshu way joogtaa dhammaan noocyada. Haddii noloshu aysan ku dhicin wax dhib ah, arrintu ma bedeli karto foomka.
Cilmi-baaristu ma ogaan karo asalka nolosha sababta oo ah baadhitaankiisu wuxuu bilaabmayaa oo dhammaadaa inta noloshu ka soo baxdo aduunka. Wuxuu diiday inuu raadiyo nolosha ka hor inta uusan u muuqan, ama uu raaco fikradihiisa ka dib markii uu ka baxo qaabkeeda. Noloshu waa in wakiil aan la garanayn ah oo muuqda oo muuqda, laakiin noloshu waa arin aan ka soo baxeyno qaabkan: Sidaa daraadeed dhaqdhaqaaqa nololeed ee ku saabsan burburinta iyo dib u dhiska qaababka. Noloshu waa mabda'a koritaanka iyo ballaarinta wax walba.
Dhulkeennu wuxuu u egyahay qulqulo qulqulaya oo qotodheer ah oo ku yaal badaalka nolosha. Waxaan ku noolnahay maqaarka buuggan. Waxaan ku soo bartay hareerahaan iyada oo mugdi ku jirta dabaasha soo socota baddaha nolosha iyo wakhti kadib, markaa, waxaan ku sii deyneynaa mawjadeena, waxaanan ku jirnaa badda barta nolosha. Sida caalamku iyo adduunyaduba waxay ku nool yihiin bakeeriga nolosha, marka maskaxdu ay ka soo baxdo neefta jidhka marka uu dhalanayo, mid walbana wuxuu u gudbaa bakhshiisa nafsaddiisa gaarka ah.
Dhismaha jirka noloshiisa wuxuu ku dhuftey oo dhistaa sida loo diyaariyey naqshadda, iyo ururada dareenka ayaa la horumariyaa. Maskaxda ku haysa jidhkan waxa lagu shubay nolol xasaasi ah. Nolosha saafiga ah ee noloshu ka timaaddo jidhka dareenka waa midab midab leh oo dareen ah. Marka ugu horeysa maskaxda ayaa ka jawaabeysa raaxaysiga dareenka nolosha. Niyadjab waa marxaladda dareenka nolosha, marxalad kale waa xanuun. Maskaxyadu waxay ku farxaan marka ay la kulmaan dareemida nolosha jirka. Ku dadaal inaad sare u qaaddo dareenka raaxada leh ee waayo-aragnimada xanuunka marka, daal badan, xubnaha dareenka ayaa ka jawaabi kara nolol maalmeedka habboon. In adduunka la iftiimiyay buuxda noloshu waa feker, waxayna u fakareysaa isbeddelka nolosha hadda.
Waxaan ku noolnahay baddan nolosheeda, laakiin horumarkeena waa mid gaabis ah, sababtoo ah waxaan ognahay oo kaliya noloshii sida kiciya dareenka. Maskaxdu waxay ku raaxeeysataa inta dareenadu socoto oo ay buuxiso noloshii; laakiin marka, inta lagu jiro horumarinta maskaxda, dareemadu waxay gaadhi karaan xaddiga jirkooda muuqaalka ah ee ay ku dhufteen dabeecadaha nolosha, haddii maskaxdu ka baxdo xakamaynta jireed ee ay u furan tahay dareenka gudaha. Kuwani waxay markaa ka qaadi doonaan duufaanta dhoobada ah ee ku soo jiidanaysa dakhliga sare ee nolosha. Markaa maskaxdu kuma dhicin by iskutallaabta ah ee illoobi, oo aan la daadin dhagaxyada illoobin iyo yaabay, laakiin waxaa loo dhejiyaa dharkeeda iyada oo loo marayo socodka iftiin ee nolosha, halkaas oo uu barto oo haysto dheelitirka oo wuxuu xakamayn karaa koorsada si ammaan ah u maraya dhammaan dariiqooyinka iyo wejiyada nolosha.
Nolosha ma istaagi karto. Nolosha dareemadu waxay socotaa waqti yar. Ka faaiidaysashada dareennada maskaxdu waxay ku xirnaan doontaa dhamaan noocyada noloshan; laakiin haddii dareenadu ay muuqanayaan oo ay ku weynaanayaan nolosha adduunkani waxay si deg deg ah u kala baxayaan. Noocyada maskaxda ku hayn lahaa way xiran yihiin oo ay tagayaan xitaa marka ay qabteen.
Mindhicir wuxuu raadiyaa waaya-aragnimo nololeed oo uu galo in uu barto baaritaanka iyo u jeedo qoto dheer. Marka maskaxdu awood u leedahay in ay raadiso qoto dheer oo ay ku hayaan kiiskiisa runta ah ee ka soo horjeeda dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda sheyga nolosha ayaa la dhammeeyaa. Maskaxdu waa la kiciyaa oo ay dhiirigelisaa mid kasta oo ka mid ah jihaadka ka soo horjeeda sida ay uga adkaato. Waxay markaas awood u leedahay in ay isticmaasho dhammaan jihaadka nololeed ee wanaagga ah halkii ay ka leexan lahaayeen koorsooyinkooda ayna ka adkaan lahaayeen iyaga.
Waxa aan hadda kufaraxayno ama ku ogaanno, waa uun nolosha qaabka isbedelka ah. Waxa aan isku dayi karno inaan ogaano oo aan ku noolaano waa nolosha weligeed ah, helitaanka weyn ee miyir-qabka ah.